Iyo itsva vhezheni ye Nextcloud 14 yave kuwanikwa | Linux Vakapindwa muropa
Iyo faira yekugovana chikuva Nextcloud yakagadziridzwa kune yayo nyowani vhezheni 14, kuunza maficha nyowani, kugadzirisa bug, uye chengetedzo.
Pindai zvinonyanya kuzivikanwa ndezvekuvandudzwa kweTalk videoconferencing system, kuvimbiswa kwevhidhiyo, yepamusoro maviri-chinhu chokwadi, faira manotsi, uye yakagadziriswa interface.
Nextcloud ndeye webhu kunyorera iyo inobvumidza yakachengeteka kuchinjana kwedata uye kutauriranan. Shanduro 14 yakaburitswa mazuva mashoma apfuura, izvo zvinounza huwandu hwakanaka hwezvinhu zvitsva mwedzi minomwe mushure meiyo yapfuura Nextcloud 13 vhezheni.
Zvese zvinhu, zvinosanganisira bhizinesi mashandiro, zvinopihwa seyakavhurwa sosi, uye iyo mibairo modhi yakafanana neRed Hat's, zvichireva kuti inopa mubhadharo-wega-maonero ekutsigira vatengi vakuru.
Nextcloud inovimbisawo inonzi yakatsiva yakatsiva, iyo inobvumira chinja nyore kubva kune yakoCloud kuenda kuNextcloud.
Easy-to-use web interface uye kunyorera pane akasiyana Android, iOS, Windows, Mac uye Linux masisitimu anoshanda
Yakareruka yemukati neyekunze faira yekugovana pamwe nekubatana pamwe nesarudzo marongero sekuchengetedzwa kwepassword uye zuva rekupera
Yakabatanidzwa odhiyo uye vhidhiyo yekutaura, sarudzo yekushandira pamwe kwemahofisi eHofisi, kusangana kweAptlook, nezvimwe
Inotsigira yekuchengetedza dhata yekunze, senge Windows Network Drive, FTP, WebDAV, NFS nevamwe
Akawanda anoshingairira uye epasi ekuchengetedza maficha, senge maviri-chinhu chokwadi, chengetedza simba, uye CSP 3.0, pamwe neyakaongororwa nzira
Nesarudzo ne server-padivi kunyorera (inogadziriswa neyekunze ndangariro) uye yekupedzisira-kumagumo kunyorera padivi revatengi (inogadziriswa nefaira)
Yakazara manejimendi kutonga pamusoro pekugovana faira uchishandisa faira yekuwana kudzora mitemo senge "DOCX inogona kungotorwa pasi kubva mukati medandemutande" kana zviito zvakatorwa pane chaiwo matanho (semuenzaniso kiyi yekumisikidza)
1 Chii chitsva mu Nextcloud 14
2 Dhawunirodha Nextcloud
Chii chitsva mu Nextcloud 14
De iko kuvandudzwa kwakagadzwa mune iyi nyowani vhezheni mbiri dzadzo dzinoshandiswa kuwedzera kuchengetedzeka- Kuongorora kwevhidhiyo kunokutendera kuti utore vhidhiyo nemushandisi usati wavapa password.
Kune maviri-chinhu chechokwadi, iyo nyowani 'gedhi' mupi akawedzerwa, izvo zvinoita kuti zvikwanisike kushandisa akachengeteka mameseji kunyorera Signal uye Teregiramu, pamwe nekutumira iyo SMS sechipiri chinhu mukusimbisa.
Iko kunyorera kwave kunatsiridzwa zvakanyanya maererano nekushandisa uye kugona. Wakawedzera nyowani yerima tema, pamwe neiyo ine yepamusoro musiyano.
taura, Nextcloud's vhidhiyo musangano musangano, yakawedzerwa zvakanyanya. Iye zvino inogona zvakare kushandiswa pasina iyo inoda kamera kana maikorofoni, nhauro dzakawanda dzinogoneka zvakafanana, mamwe maprotocol anotsigirwa, uye mashandiro akagadziridzwa zvakare.
Nepo kare zvaive zvichikwanisika kutaura pane yakagovaniswa faira, ikozvino mune iyi nyowani vhezheni yechishandiso unogona kunama manotsi.
Paunenge uchitsvaga mafaera, iwe unogona zvakare kutsvaga iwo mavara mune iwo manotsi. Netsaona dzadzimwa mafaera ikozvino inogona kudzoreredzwa.
Nhoroondo yemafaira akadzimwa inoita kuti zvive nyore kudzoreredza mafaera.
Kubatana pakati peakaparadzanisa Nextcloud zviitiko zvakapararira kugovana kweboka. Mune ramangwana, izvi zvinofanirwa kuwedzerwa kune zvimwe zvinhu, zvinosanganisira makarenda, vanobatika, uye hurukuro.
Kune system manejimendi, pane yakareruka yekuvandudza yezvikumbiro uye yepakati registry mune iyo Systemd magazini.
Kuteerana neEuropean data dziviriro dhairekitori GDPR iri nyore nechimwe chakasiyana chikumbiro uye odhita reogi faira.
Kune emabhizinesi, kune rutsigiro rweOpenStack v3 Swift chinhu chitoro neAPI rutsigiro rwekuti zivikanwe uye system mvumo yeiyo huru yekuchengetedza backend.
Izvo zvakare zvinokwanisika kuratidza kune maseva eSamba uchishandisa Kerberos.
Iyi vhezheni itsva yave kuwanikwa kurodha pasi uye nekuda kweizvi iwe unofanirwa kuenda kune yepamutemo webhusaiti yeprojekiti kwaunogona kuwana iyo yekuisa installer.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Iyo itsva vhezheni yeNextcloud 14 yave kuwanikwa
Mikel Etxebarria anobva kuMK Electrónica: hurukuro yega yeLxA